Banyere JCT - Taizhou Jingchuan Electronics Technology Co., Ltd.
Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co., Ltd. bụ a omenala technology ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta, ahịa, na mgbazinye nke Ikanam mgbasa ozi ugbo ala, bu ugbo ala, na mobile ogbo ugbo ala.
E guzobere ụlọ ọrụ ahụ na 2007. Site na ọkwa ọkachamara ya na teknụzụ tozuru etozu na ụgbọ ala mgbasa ozi ọkụ, ọkụ na-ahụ maka mgbasa ozi ndị ọzọ na ngwaahịa ndị ọzọ, ọ pụtala n'ike n'ike n'ọhịa nke mgbasa ozi mkpanaka n'èzí ma bụrụ onye ọsụ ụzọ na-emepe ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi ọkụ na China. Dị ka onye ndú nke China Ikanam media ugbo ala, Taizhou Jingchuan onwe ha mepụtara na-enwe ihe karịrị 30 mba technology nchọpụta Kemịkalụ. Ọ bụ ọkọlọtọ rụpụta maka Ikanam mgbasa ozi ugbo ala, okporo ụzọ uwe ojii Ikanam mgbasa ozi ugbo ala, na ọkụ mgbasa ozi ugbo ala. Ngwaahịa ahụ gụnyere ihe karịrị ụdị ụgbọ ala 30 dị ka gwongworo ndị na-agba ọkụ, ndị na-adọkpụ ọkụ, ụgbọ ala ndị na-agagharị agagharị, ndị na-agagharị agagharị, ọkụ ndị na-acha ọkụ ọkụ, ndị na-ahụ maka nduzi okporo ụzọ na ihe eji emepụta ụgbọ ala.
Na Machị 2008, enyere ndi kompeni anyi “2007 China Advertising New Media Contribution Award”; n'April 2008, enyere ya "onyinye teknụzụ dị elu maka iduga ọganiihu mgbasa ozi nke China na n'èzí"; na 2009, e nyere ya aha "China China Brand and Communication Conference '' Brand Contribution Award 'na-emetụta Chinese Enterprise Brand Star".
Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co., Ltd. emi odude ke Taizhou, Zhejiang ógbè, ndị kasị mma livable obodo na China. Taizhou dị na etiti ụsọ oké osimiri nke Zhejiang Province, na nso nso East East na ọwụwa anyanwụ, gburugburu ebe obibi mara mma. Anyị ụlọ ọrụ dị na Taizhou aku mpaghara na nwere adaba mmiri, ala na ikuku njem. Anyị ụlọ ọrụ e ọdịda "Taizhou Key Enterprise nke Cultural Export" na "Taizhou Key Enterprise nke Service Industry" site Taizhou ọchịchị ọchịchị.
Ulo oru mmeputa nke ulo oru di elu, zuru oke, ma n'otu oge ahu nwere ihe di iche iche nke ule na ngwa. The ụlọ ọrụ nwere oru oma management otu na R & D otu, na-elekwasị anya iwebata na ọzụzụ nke agadi oru pesonel na ndị ọkachamara. Site na ike nyocha sayensị siri ike, ụlọ ọrụ anyị eguzobewo usoro ọzụzụ, ụlọ njikwa na ebe R&D. Ugbu a, e nwere mmepụta technology ngalaba, àgwà nnyocha ngalaba, ọkọnọ ngalaba, ahịa ngalaba, mgbe-sales ọrụ ngalaba, ego ngalaba na ndị ọzọ na ngalaba, na doro anya nkewa nke oru na nkà mmụta sayensị na oke.
Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ amụma dị mma nke "kpakpando ise, na-achọ ihe ọhụrụ site na eziokwu". Kemgbe mmalite ya na 2007, ogo ngwaahịa yana ọrụ ahịa mgbe ahịa dị elu karịa nke otu ụlọ ọrụ ahụ. The ụlọ ọrụ nwere a tozuru okè mba ọzọ ahia ahịa otu na a ọkachamara mgbe-sales oru ọrụ otu. A na-ebupụ ngwaahịa anyị karịa mba 50 na mpaghara dịka Europe, United States, na Middle East. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ na-emeju ndị ahịa afọ ojuju na ọrụ dị elu na ọrụ dị elu.
Mission Jingchuan: Ka akụkụ ọ bụla nke ụwa nwee anụ oriri ọhụụ
Chukpụrụ Jingchuan: Innovation, Ime ihe n'eziokwu, mmepe na mmeri
Nkwenkwe Jingchuan: Ọ dịghị ihe dị n’ụwa agaghị ekwe omume
Ihe mgbaru ọsọ Jingchuan: Iji wuo mba di iche-iche na ugbo ala nke ugbo ala
Jingdị Jingchuan: itinye ume na ọsọsọ, debe nkwa
Njikwa Jingchuan: Ebumnuche na nsonaazụ na-esi na ya pụta
N'otu oge ahụ, Jingchuan anọwo na-agbaso na-aga n'ihu na nkà na ụzụ ọhụrụ na-emepụta uru maka ahịa, nke a na-ahuta ka isi iyi nke vitality maka enterprise. Jingchuan meriwo ntụkwasị obi na imekọ ihe ọnụ nke ndị ahịa n'ụwa nile na ya na-amụba ọhụrụ ikike, pụtara ìhè mgbanwe customization ike na-esiwanye zuru okè nnyefe ikike.
N'ịbụ ndị nwere ohere na ihe ịma aka ọhụrụ, Jingchuan ga-aga n'ihu na ebumnuche ụlọ ọrụ ya nke "ịmepụta alaeze azụmaahịa", kpebisiri ike ịbụ onye na-eweta ọrụ zuru oke nke ndị mgbasa ozi ụgbọ ala na China. Nchọpụta miri emi na mmepe nke ụgbọ ala mgbasa ozi LED, igwe na-adọkpụ ọkụ na ngwaahịa ndị ọzọ, iji nye onyinye dị ala na mmepe nke ụlọ ọrụ mba ndị China.
Ikwute Mobile Truck, Mobile Ikanam Screen Truck, Ikanam Mobile Truck N'ihi Sale, Mobile Dugara Billboard Truck, Dugara Mobile Trailer, Ekwentị Mgbasa Ozi Ekwentị,